Ny fanafoanana ny famoahana dia nampiasaina hamongorana orinasa iray
Ny orinasa na orinasa dia tsy maintsy mametraka taratasy fanamarinana na lahatsoratra momba ny fanapoahana miaraka amin'ny fanjakana mba hampitsaharana ny fisian'ny orinasa. Ireo orinasa voapetraka dia hanampy anao amin'ny fametrahana ireo taratasy ireo any amin'ireo fanjakana 50 sy any amin'ireo toerana vahiny.
Amidio ny orinasa / orinasa
Amin'ny toe-javatra sasany, ny fisian'ny orinasanao dia afaka ampiasain'ireo olona mikasa hampiditra orinasa iray efa antitra. Ny Companies Incorporated dia afaka mividy ny orinasa avy aminao noho ny lisitra ao amin'ny lisitry ny orinasa antitra. Mifandraisa aminay anio mba hahitana raha mahafeno ny kaontinao ianao.